लकडाउन नलम्बिए वैशाखबाट टेलिभिजन चलाउँछौँ : रामकुमार एलन - Khabar Break | Khabar Break
रामकुमार एलन, निर्देशक, बागमती टेलिभिजन
चैत १८ गतेदेखि हेटौँडाबाट परीक्षण प्रसारण गर्ने भनिएको बागमती टेलिभिजनको प्रसारण ुदेश लकडाउनुका कारण केही साता पर सर्ने भएको छ ।
यसै सन्दर्भमा गरिएको कुराकानी
प्रदेश ३ को राजधानी र नाम तोकिएपछि त्यही नाममा प्रदेशस्तरको राष्ट्रिय टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने हाम्रो समूहको तयारी गएको तिहारताका नै भएको हो । प्रदेश सरकारले बागमती नामकरण र हेटौँडा राजधानी बनाएपछि हामीले प्रसारण योजना बनाएको बागमती टेलिभिजन ुराष्ट्रलाई राष्ट्रियस्तरको टेलिभिजन हेटौंडाबाटु भन्ने नाराका साथ प्रसारण तयारी गरिरहेका छौँ । २४ सै घण्टा प्रसारण हुने बागमती टेलिभिजनमा दैनिक १४ समाचार बुलेटिन हुनेछन् । करेन्ट अफेयर्सका न्युज शो, टक शो, मनोरञ्जन प्याकेजमा विविध लाइभ शो र रेकर्डेड शो हुनेछन् । यो केबल टेलिभिजन हो । तर राष्ट्रभर डिजिटल केबलमार्फत प्रसारण हुनेछ । डिस होममा केही महिनापछि प्रसारण हुनेछ ।
एउटा प्रतिवद्ध टिम छ, यो टिभीमा बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाका खास सामग्री हुनेछ । अब हेटौँडामा पनि मिडियामा आकर्षक तलब र भविष्य छ भन्ने सन्देश दिनेछौँ । हामीसँग शक्ति एफएम १०३।४ मेगाहर्ज पनि छ । अर्को एफएम बागमती एफएम पनि चलाउँदैछौँ । अहिले नै ४० प्रतिशत जति जनशक्ति छन्, हेटौंडाका धेरै मिडियाका साथीहरु हामीसँग हुनेछन् । केही प्रदेशका विभिन्न जिल्ला र काठमाडौँबाट आउनु हुनेछ ।
मिडियामा ुतिलस्मीु लगानी हुन्छ भन्छन् नि ?
हाम्रा सबै कारोबार राज्यलाई तिरिएको करकेन्द्रित हुनेछ । पारदर्शी हुनेछ । लगानी हामीले गरेका छौँ । बैंकको किस्ता हामीले तिर्ने हो । कसैको अदृश्य लगानी छैन । ३-४ करोड रुपैयाँ नपत्याउने अवस्थाका होइनौँ हामी ।
बागमती टेलिभिजन नै नाम किन राख्नु भयो ? अरु समूहले पनि यही नाम राजेका थिए कि ?
माथि नै भनेँ नि, प्रदेशको नाममा टेलिभिजन चलाउने तयारी ४ महिनाअघिको हो । प्रदेशको नाम शैलुङ भए, त्यही नाम हुन्थ्यो । प्रदेशको नाम नेवा ताम्सालिङ भए त्यही नाममा इजाजत पत्र लिन्थ्यौँ । अरु समूहले यही नाममा इजाजत पत्र लिन खोजेको विषय हामीलाई जानकारी छैन । तर हाम्रो तयारी पुरानै हो । व्यक्तिगत चाहनामा त म टेलिभिजनको नाम आमाको नाममा राख्न चाहन्थेँ स् च्यानल चन्द्रमा । चन्द्रा मेरो आमाको नाम हो ।